Welcome to Aayaha Nolosha » NINKA DUNIDA UGU TAAJIRSAN OO XAASKIISA FURAYA
NINKA DUNIDA UGU TAAJIRSAN OO XAASKIISA FURAYA
January 10, 2019 - Waxaa Qorey : Caaqil Dalmar -
Ninka loo aqoonsaday inuu dunidan aan ku nool nahay ugu hanti badan yahay ayaa Xaaskiisa oo ay wada noolaayeen 25-sano furaya.
Jeff Bezos oo ah madaxa shirkadda qalabka elektarooniga ee Amazon ayaa xaaskiisa MacKenzie furaya kadib markii khilaaf hareeyay ay xalin kari waayeen.
Lamaanayaashaa oo is guursaday sanadkii 1993-dii ayaa warka ku saabsan furriinkooda ugu dhawaaqay bayaan ay si wada jir ah Arbacadii u soo dhigeen barta Twiter-ka.
“Kadib wakhti dheer oo ay naga dhex jirtay isfaham darro, isla markaana aan marar badan isku daynay inaan kala tagno, waxaan hadda go’aansannay inaan is furno, nolosheennana aan sii wadanno annagoo saaxiibo ah”, ayay lamaanahani ku yiraahdeen bayaankooda.
“Waxaan dareemeynaa inaan aad u nasiib badan nahay maadaama aan is helnay, waxaana ku faraxsanaa inaanu lamaane ahayn sanad kasta oo ka mid ah muddadaas ka soo wareegtay xilligii aan isguursannay”, ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay lamaanahan maalqabeennada ah.
“Haddii aan ogaan lahayn inaan kala tagi doonno 25 sano kadib, guurkeenna oo dhan waan soo bilaabi lahayn mar kale, waxaan isla soo wadaagnay nolol aad u qurux badan waxaana hadda aragnaa inuu naga horreeyo mustaqbal wanaagsan, waalid ahaan, saaxiib ahaan iyo iskaashato ahaanba” ayuu bayaankiisa ku yiri maalqabeenka.
Sannadkii la soo dhaafay waxay lamaanahan si wadajir ah u fulinayeen mashruuc loogu tala galay in lagu caawiyo dadka hoy la’aanta ah iyo in lagu dhiso iskuullo ay dhigtaan carruurta ka soo jeeda qoysaska saboolka ah.
Mr. Bezos oo u dhashay dalka Mareykanka iyo xaaskiisa ayaa leh 4 carruur ah oo isugu jira saddex wiil oo ay dhaleen iyo hal gabar oo ay soo korsadeen.
Maalqabeenkan ayaa ah ninka isla leh shirkadda Amazon oo la aasasay 25 sano kahor, waxayna Usbuucan dhaqaale ahaan ka hormartay shirkadda Microsoft, waxayna noqotay shirkadda xilligan ugu dhaqaalaha badan guud ahaan dunida.
Mr Bezos, oo 54 sano jir ah ayaa loo aqoonsan yahay inuu noqday qofka ugu maalqabeensan caalamka, sida laga soo xigtay shirkad qiimeysa hantida shakhsiyaadka bilyaneerrada ah ee dunida, oo lagu magacaabo Bloomberg Billionaire Index.